Amathiphu nezincomo ze-Fallout Shelter | Izindaba zamagajethi
Amathiphu nezincomo ze-Fallout Shelter
Bemisebe Shelter ifinyelele amapulatifomu eselula ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, kepha izigidi zabasebenzisi sezivele zikhombisile intshisekelo yazo kulesi sihloko esikhethekile samadivayisi abo ahlakaniphile, azosebenza njengesidambisi futhi avuselele ukufika kwalabo abalindelwe kakhulu fallout 4 a I-PlayStation 4, i-Xbox One y PC.
Uma ufake Bemisebe Shelter kudivayisi yakho futhi ufuna ukuba nomsebenzi omude futhi okhazimulayo onakekela isiphephelo sakho, ngeke kube lula. Okwakhe Bethesda ubephethe ukulungiselela uhlu lwe izincomo y amathiphu ukuze izindlu zakho zokuhlala zikhule njalo, zikhiqizwe futhi zithuthukiswe.
Ukwakha amakamelo endaweni yakho yokukhosela nganoma iyiphi indlela kungahle kudale ukudideka lapho inani labantu landa. Isixazululo esisodwa ukugcina amakamelo ezinhlobo ezifanayo ehlangene, ngoba lokhu kuzokwenza kube lula ukuqoqa izinsiza kanye nokwabela kabusha abahlali. Zama ukumba phansi ngokushesha ngangokunokwenzeka. Gcina izitshalo ezimbili zensiza ngayinye: ukudla, amanzi, namandla. Uma wakha igumbi elibanzi kathathu eduze kwekheshi negumbi elibanzi elimbili eduze kwalapho, uzoba nesikhala esanele sinye ikheshi ekugcineni kwesitezi, kolunye uhlangothi lomnyango. Phinda le nqubo kusisetshenziswa ngasinye futhi uzoba nakho konke okuhlelwe endaweni eyodwa, kanye nezikhala ezintathu ezingenalutho zokuhlala ngakwesobunxele bekheshi ohlangothini lokungena.
Khumbula ukuthi okungenhla uhlelo lwesikhathi eside! Qiniseka ukuthi uzinika isikhathi sokwakha ngendlela efanelekile, ngoba lapha ukusebenza kahle kuyisihluthulelo sangempela sempumelelo. Uma unweba ngokushesha okukhulu, kuzoba nzima ukuphatha izinsiza zakho futhi ugcine abantu bejabule.
Hlanganisa amakamelo noma nini lapho ungakhona
Uma wakha igumbi lohlobo olufanayo eduze kwelinye, amakamelo womabili azojoyina ngokuzenzakalela kububanzi obuthathu. Amakamelo okuhlanganisa anezinzuzo ezinkulu: Abahlali abasebenza ndawonye nabanye abahlali bajabule kakhulu futhi bakhiqiza kakhulu, ngakho-ke ukubeka abafowethu abayisithupha ukusebenza ndawonye kuzuzisa wonke umuntu. Futhi, abahlali abaningi onabo egumbini lokuqeqesha, wonke umuntu uzoziqeqesha ngokushesha okukhulu.
Ungathuthukisi amakamelo ngaphambi kwesikhathi
Uma uzama ukwakha igumbi elisha egumbini elithuthukisiwe, zizohlukaniswa uze uthuthukise ikamelo lesibili liye ezingeni lelokuqala. Lokho kusho ukuthi uzolahlekelwa yikho konke ukusebenza kahle ongakuthola ngekamelo elihlanganisiwe. Uma kungenzeka, zibophele ndawonye ngaphambi kokuthuthuka.
Ingalo okungenani umuntu oyedwa ohlala egumbini ngalinye
Impilo ngemuva kwe-apocalypse inzima: ungavumeli noma ngubani akutshele ngenye indlela. Ukusuka lapho, izinhlobo ezintathu zamashwa zingenzeka kubahlali bakho nganoma yisiphi isikhathi. Igumbi lingasha, okuyinto eyihlazo. Kungabuye kugcwale ama-radroaches, okubi kakhulu. Futhi abaphangi bangahlasela yonke indawo yokukhosela, obekungavele kube ukuphakama kwamashwa. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi uzilungiselele zonke lezi zigameko. Okokuqala, imililo: imililo kulula. Abahlali abasebenza ekamelweni elishile bazokhipha ngokuzenzakalela izicimi-mlilo futhi balwe namalangabi. Ama-radroach, nokho, enye indaba: abantu abangaphethe zikhali bangabanyathela, kepha kuthatha isikhathi eside futhi ekugcineni igumbi ligcwele abantu abalimele. Kwenzeka okufanayo nakubaphangi, yize bezohamba bezungeza isiphephelo baze bamiswe. Indlela engcono yokuqeda laba bahlaseli ababili izikhali. Kungakuhle uma wonke umuntu ehlomile, kepha okuncane ukuthi okungenani umuntu oyedwa egumbini ngalinye uphatha izikhali.
Ungadeli umugqa wokuqala wokuzivikela
Kuzothatha isikhashana ukusabalalisa izikhali, ngakho-ke ukuba nesitoreji sazo ekugcineni kungasiza ukuhlomisa abahlali bakho uma kunesimo esiphuthumayo. Hlomisa noma ngubani obhekene neRavens noma iRaiders ngezikhali bese ubabuyisa ezibhakeleni zabo lapho isigameko sesiphelile. Kukhona iqhinga lokuthi uma usuqongelele izikhali ezimbalwa: Ngaphezu kokugcina, gcwalisa igumbi lokuqala ngakwesokudla somnyango wegumbi elinabahlali abaphethe izikhali. Leli kuzoba igumbi lokuqala abaphangi abangena kulo uma bengena emnyango, futhi uma ulandela iseluleko, kuzoba igumbi elibanzi kathathu elinabahlali abayisithupha abalinde ukulungela ukumisa abaphangi ngokushesha. Ungabeka futhi onogada ababili emnyango, kepha kungenzeka ungazidingi uma kunezikhali ezanele ekamelweni lokuqala.
Hlola ugwadule njalo
Izigameko eziningi ngokwengeziwe zizokwenzeka njengoba indawo yakho yokuhlala ikhula, okusho ukuthi uzodinga izikhali eziningi ngokwengeziwe. Ngalesi sizathu, kufanele uthumele abahlali bayohlola indawo eyihlane, ngoba lapho bangathola zonke izinhlobo zezikhali. Vele, lokho kusho ukuthi uzoba nesikhali esisodwa esihle nesudi eyodwa enhle ematasa isikhashana (ngoba uzobe uthumela abahlali bakho ngegiya elihle kakhulu, akunjalo?), Kepha izinzuzo zikwedlula kude nokubi.
Ngokusobala, kunezingozi eziningi ngaphesheya komnyango wegumbi, ngakho-ke ngaphezu kokuhlomisa i-scout ngegiya elihle kakhulu (kanye nezikhuthazi eziningi kanye neRadAways ngangokunokwenzeka), uzodinga ukuhlola intuthuko yakhe njalo. Uma kubukeka sengathi izinto ziba yingozi kakhulu laphaya (ikakhulukazi uma ziphansi empilweni futhi azikho izikhuthazi), shaya inkinobho ethi Buyisa bese umuntu ohlala khona ezobuyela ekhaya. Ngeke zibe khona izingozi ohambweni lokubuya, okulungile, futhi kuzothatha kuphela uhhafu wesikhathi okuthathe ukuthi uhambe ekuqaleni, okungcono kakhulu. Ungethuki kakhulu ngokushiya umuntu ohlala ogwadule isikhathi eside kakhulu - uma umuntu eluma uthuli lapho unganakile, ungabavuselela ngokusebenzisa amabheji.
Sebenzela ukufeza izinhloso zakho
Kumenyu yePip-Boy uzobona isithonjana esibukeka njengokuhlobisa. Kuzoba nezinhloso zakho: uhlu lwezinhloso, uma uzifinyelela, ezizokuzuzela inqwaba yamabheji (noma, kwesinye isikhathi, ibhokisi lesidlo sasemini eligcwele izimpahla ze-premium). Izinjongo zokuqedela zingenza ukusakazwa kwemali engenayo eyengeziwe, ngaphezu kwemishini eyengeziwe (noma abalingiswa abasezingeni eliphakeme kanye nezikhali ezingavamile), ozozithola emabhokisini emini.
Ungabi yisigqila sezinhloso zakho
Ukusuka lapho, kwesinye isikhathi uzofinyelela umgomo ongahambelani nezinhloso zakho zamanje. Akukho okwenzekayo! Kanye ngosuku ungalahla eyodwa yalezi zinhloso ezintathu bese uthola entsha. Kepha ungakhathazeki kakhulu noma ngabe usuvele uzisebenzise zonke izabelo zakho. Izinhloso eziningi zizophothulwa ngenkambo ejwayelekile yomdlalo. Khumbula ukuqoqa umvuzo wakho ukuze ukwazi ukwenza kusebenze inhloso entsha!
Hlanganisa abahlali bakho
Ukukhulisa indawo yakho yokuhlala, uzodinga abahlali abaningi. Inkinga ukuthi indawo eyihlane ayigcwele ncamashi abantu abafuna ikhaya. Ngakho-ke, ukunweba indawo yakho yokuhlala, uzodinga abahlali bakho ukwenza abahlali abasha. Kufanele nje uthumele umuntu ohlala naye futhi ahlalise ezindaweni zokulala futhi ubheke ukuthi zihlala kanjani futhi, ahem, into eyodwa iholela kokunye. Ukuphakama kwesilinganiso sakho se-Charisma, izinto… zizokwenzeka ngokushesha okukhulu. Zizokwenzeka ngokuqinisekile, ngaphandle kokuthi izithandani zihlobene. Futhi, bheka! Ukukhulelwa okusheshayo! Ngokushesha uzoba nomhlali omusha (noma ohlala phansi), ozohamba ekhosela aze abe mdala futhi anganikezwa umsebenzi.
Kunezinto ezimbalwa okufanele uzigcine engqondweni ngaphambi kokuqala isivivinyo esihle sokuzalela. Owokuqala: khumbula ukuthi abahlali ngesimo sethemba elihle bayobalekela noma iyiphi ingozi ukuvikela ingane yabo, ngakho-ke igumbi eligcwele abahlali abakhulelwe kuphela ngeke libe nokuzivikela. Owesibili: khumbula ukuthi amalungu omndeni ngeke enze lutho ngaphandle kokuxoxa lapho ethunyelwa ndawonye lapho kuhlala khona abantu, ngakho-ke qiniseka ukuthi lo mbhangqwana awuhlobene uma unentshisekelo yokwandisa inani labantu bakho. Okwesithathu: khumbula ukuthi, njengoba isiphephelo sakho sikhula, kungaba nzima ukukhumbula ukuthi ubani ohlobene nobani noma ngubani ovelele kokunye okukhethekile OKUKHETHEKILE Khumbula ukuthi ungaluhlela kalula uhlu lwabahlali ngezindlela eziningana ukuze ukwazi thola njalo ukuthi ngubani omdingayo, nokuthi ungaqamba kabusha noma yimuphi umhlali noma nini lapho ufuna khona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » Amathiphu nezincomo ze-Fallout Shelter
Ungayithenga kuphi futhi kanjani i-OnePlus 2 ngaphandle kwesimemo
Izinto eziyishumi zobudedengu cishe sonke esizenzayo kwi-Intanethi futhi okufanele sizixazulule namuhla